टीकापुरको सामाजिक सद्भाव मजबुत हुँदैछ • Anumodan National Daily
टीकापुरको सामाजिक सद्भाव मजबुत हुँदैछ
तत्कालिन नेकपा (एमाले) को उम्मेदवार भएर टीकापुर नगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी युवा नेता तपेन्द्र रावल २०३० साल बैशाख २४ मा अछाम जिल्लाको बान्नी गढी जयगढ गाउँपालिका सुगालीमा जन्मिनु भएको हो । रावलको प्राथमिक शिक्षा अछाममै र कक्षा छ देखि आइएसम्मको अध्ययन भारतको महाराष्ट्रमा भएको हो । स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहको अध्ययन काठमाडौंमा पूरा गर्नु भएका रावल २०४९ देखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ । अनेरास्ववियू र तत्कालिन एमाले पार्टीमा विभिन्न जिम्मेवारी बहन गर्नुभएका रावल टीकापुरमा विभिन्न सामाजिक संस्थामा पनि क्रियाशिल रहनुभयो । प्रष्ट विचार, खरो स्वभावका युवा नेता रावल विकासका लागि समाजका हरेक वर्गको उत्थान र सबै पक्ष सशक्त हुनुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ । मुलुककै सुन्दर नगरका रूपमा परिचित टीकापुर नगरपालिका ०७२ भदौको हिंसात्मक घटनापछि झनचर्चित छ । प्रस्तुत छ टीकापुर अशान्त हुँदा नगरको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएका मेयर रावलसँग विकास, निर्माण, पर्यटन, सामाजिक सदभावका बारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
प्रमुख, टीकापुर नगरपालिका
टीकापुर नगरपालिकाले यस वर्ष गर्ने प्रमुख विकास निर्माणका काम र लागु गर्ने नीतिहरू के हुन ?
– टीकापुर नगरपालिकाको नगरसभाले यस वर्षका लागि नीतिनियम, बजेट तथा कार्यक्रमहरू पारित गरिसकेको छ, केही कामहरू सुरु भइसकेका छन् भने केही कामहरू सुरु हुने प्रकृयामा रहेका छन् । यस वर्ष हामीले नगरवासीहरूलाई टीकापुर अस्पतालमा उपचार गराउदा रगत आवश्यक परेमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरेका छौं । यसका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टीकापुर शाखालाई आवश्यक स्रोत र साधनहरू उपलब्ध गराइएको छ र यो कार्यक्रम लागु भइसकेको छ । रेडक्रससँगकै सहकार्यमा नगरभित्रका सबै सुत्केरीहरूको अस्पतालसँगको पहुँच सर्वसुलभ गराउनका लागि नगरभित्रका विभिन्न ठाउँबाट टीकापुर अस्पतालसम्म सुत्केरी ल्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदै छ । हामी केही महिना मै यो कार्यक्रम लागु गर्दैछौं । अर्को कुरा टीकापुर अस्पतालमा बाल रोग विशषेज्ञको सेवा नभएका कारण बालबालिका बिरामी हुँदा नगरवासीले नेपालगञ्ज वा धनगढी लिनुपर्ने बाध्यता थियो, यो समस्यालाई समाधान गर्न हामीले टीकापुर अस्पतालमा नै बाल रोग विशषेज्ञको सेवा सुरु गरिसकेका छौं, निकट भविष्यमा नै हामी एनआईसियु सेवा सुरु गर्दैछौं । फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि एक गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा काम सुरु हुँदैछ । छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले विगत वर्षमा नै काम सुरु गरेको थियो । पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन सकेका छैनन्, यसका लागि जनचेतनाका साथै वैकल्पिक उर्जासँगको सहकार्यमा काम गर्ने गरेर योजना बनाइदैछ । नगरपालिकासँग जनताका गुनासाहरूलाई व्यवस्थित गर्न केही महिना भित्रै जनतासँग मेयर कार्यक्रम सुरु गरिदै छ ।
पूर्वाधार निर्माणका कामहरूमा यस वर्ष हामीले टीकापुरका सम्भव भएसम्म सबै वार्डहरूलाई समेट्ने गरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेर काम अगाडि बढाएका छौं । गरिब र असहायजनताको आवासमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने उद्देश्यले जनताआवास कार्यक्रमको काम यसैवर्षदेखि सुरु हुँदैछ । यसको मोडा लिटी के हुने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । कर्णाली नदीको दौलतपुर घाटमा दाहसंस्कारका लागि आधुनिक मौक्षघाट निर्माणको काम यसैवर्ष सुरु हुने छ । टीकापुर पार्कको मास्टर प्लान बनाउने काम यसै वर्ष गरिने छ ।
हामी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ र २ का सबै प्रतिनिधिहरू सहितको पहलबाट यसवर्ष खक्रौलालाई मुल भन्सार बनाउन सफल बनेका छौं । कैलालीको टीकापुरमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न हामी सफल बनेका छौं । यस्तै सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले समेत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा कृषिको डिन कार्यालय नै स्थापना गरेको छ र कृषिको पढाई सुरु भएको छ । यस्तै टीकापुरवासीको सपनाका रूपमा रहेको टीकापुर पोलिटेक्निकल इन्ष्टिच्युटले यसवर्ष सब इन्जिनियर र भेटिनरीको पढाई सुरु गरेको छ । यी सबै हामी सबैको साझा पहलबाट सम्भव भएका कामहरू हुन ।
तपाई निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सक्नु भएन भन्ने जन गुनासाहरू सुनिन्छन त ?
– पहिले नै हल्ला गर्ने भन्दा काम गर्ने मेरो व्यक्तिगत स्वभाव हो । हामी कामले गुनासाहरूको जवाफ दिन चाहान्छौं, हामीले सुरु गरेका कामहरू जनताका बीचमा नपुगेका हुन सक्छन् । मैले अघि नै तपाईलाई भनि सकें, केही काम भएनन् भन्ने निधार हल्ला मात्रै हो । हामी टीकापुरलाई अझ व्यवस्थित र सुन्दर शहर बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । परिणम देखिन केही समय लाग्न सक्छ ।
टीकापुर एक पर्यटकीय नगरी पनि हो, यसको विकासका लागि कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
– टीकापुर कर्णाली नदीको तटीय अवस्थितिमा रहेको सुन्दर नगर हो । यहाँ नेपालकै सर्वाधिक ठूलो सुन्दर टीकापुर पार्क छ, डल्फीनको अवलोकन गर्न सकिने डल्फीन क्षेत्र यही छ । नेपालका प्रायः सबै ठाउँमा पाईने संस्कृतिहरू यहाँ भेटिन्छन् । थारू संस्कृति लगायत सुदूरपश्चिमको देउडा तथा अन्य आदिवासी जनजातिका संस्कृतिले हामीहरू समृद्ध छौं । यी सबै आधारमा टीकापुर पर्यटकीय नगरी पनि हो । नेपाल सरकारले यहाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा टीकापुर सर्किट भनेर समावेस पनि गरेको छ । हामी यसको विकासका लागि नीतिनिर्माण गर्ने काम, योजना बनाउने काम पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर यस ठाउँको पर्यटनको प्रवद्र्धन, विकास र प्रचार गर्ने काम गरिरहेका छौं । मैले अघि पनि भने मुख्य तथा यहाँको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य टीकापुर पार्कको दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाउने काम हुँदैछ । यस वर्ष नै सम्पन्न हुने गरी टीकापुर पार्कको आधुनिक गेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । कर्णाली नदीमा हुने ¥याफ्टीङलाई अझ प्रचार गर्ने काम हुँदैछ । डल्फीन क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि हामीले नै कैलाली भ्रमण वर्ष २०७५ अन्तर्गत डल्फीन अवलोकन उत्सव मनाइसकेका छौं । हामीसँग विश्वमा नै नभएको पूर्वतिर मुखफर्किएको शिवलिंग भएको पदमप्रकाशेश्वर शिवमन्दिर रहेको छ । प्रचीन कालमा भारत वर्षबाट मानसरोबर दर्शन गर्ने धर्माबलम्बीहरू नैमीसारण्यमा यज्ञ गरेर यहि बाटो हुँदै टीकापुरको सत्तिमा रहेको पदमप्रकाशेश्वर शिव मन्दिरमा दर्शन गरेर कर्णाली नदीको तिरैतिर मानसरोबर दर्शन गर्ने गरेको विभिन्न पुस्तकहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो इतिहास बोकेको मन्दिरको प्रचारप्रसार गर्नु आवश्यक छ हामीले यसलाई समेत मनन् गरेका छौं र समग्र टीकापुरको पर्यटन विकासका लागि आवश्यक काम हुँदैछन् ।
टीकापुर नेपालकै व्यवस्थित शहरी प्लानिङ भएको शहर हो, शहरीकरण विस्तार गर्न के भइरहेको छ ?
– तपाइले भने जस्तै टीकापुर व्यवस्थित शहरीकरणको योजना भएको शहर हो । समयको अन्तरालसँगै यो शहरी योजनाको विस्तार आवश्यक भइसकेको छ । मैले अघि नै तपाईलाई भने हामीले यसवर्ष टीकापुर चक्रपथको डिपिआर बनाउँदै छौं । चक्रपथसँग जोडेर कहाँ कहाँ नयाँ शहरी बसाउने भन्ने विषय त्यसपछि छलफल हुने छ ।
कर्णाली नदीको डुबान र कटानबाट टीकापुर प्रत्येक वर्षामा आक्रान्त भइरहन्छ, नगरपालिकाले यो समस्याको समाधानका लागि के गरिरहेको छ ?
– यो समस्यालाई समाधान गर्न अहिले टीकापुर नगरपालिका अहिले एक्लै छैन । हामीसँग नेपालकै राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिचाँई आयोजना रहेको छ । आयोजनाले कर्णाली नदीको तटबन्धलाई विस्तार गर्दै लगेको छ । सिंचाई आयोजनाले काम सुरु गरिसकेपछि अहिले डुबान र कटानको समस्या समाधान पनि भएको छ । सिंचाई आयोजनाले यसवर्ष टीकापुरमा बाँकी सबै तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर काम सुरु गर्दैछ । यस्तै नगरनगरपालिका र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा पनि कामहरू भइरहेका छन् ।
२०७२ भदौ र ७ र ८ को घटनाका कारण टीकापुरमा अझै पनि सामाजिक सद्भाव कमजोर छ भनिन्छ, नगरपालिकाले के गर्दै छ ?
– २०७२ भदौ ७ र ८ को घटनाका नहुनु थियो, तर हामीले नसोचेको भइसकेको छ । अब त्यो घाउलाई कोट्याएर मात्रै बसेर हुँदैन । त्यो घटनाका केही प्रभावहरू अहिले पनि समाजमा छन्, तर बाहिर हल्ला गरिए जस्तो टीकापुरमा सामाजिक सद्भाव कमजोर छैन । हामी विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायहरू एक आपसमा मिलेर बसेका छौं । छिमेकीहरूका बीचमा भातृत्व र सहकार्यको विकल्प हुँदैन । केही बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू उक्साहटमा त्यो घटना घटेको थियो । विविधतायुक्त समाजमा विभिन्न विचारहरूका बीचमा छलफल हुन सक्छ, विचारमा मन्थन हुन सक्छ, यसलाई सामाजिक सद्भाव कमजोर भएको भनेर व्याख्या गर्नु गतल हुन्छ । टीकापुरमा सामाजिक सद्भाव कमजोर छैन, मजबुत छ । अर्कोतर्फ टीकापुर नगरपालिकामा हामी जोजो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छौं, यसमा समेत हामीलाई जनताले समावेसी जनादेश नै दिएका छन् । राजनैतिक आधारमा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूलाई हेर्दा विविधतायुक्त जनादेश आएको छ । यसले हामी राजनीतिककर्मीहरू भन्दा जनताहरू पनि समावेसीता र सामाजिक सद्भावयुक्त टीकापुर हेर्न चाहेका छन् भन्ने देखिन्छ । तीन वर्ष अघि कमजोर बनेको सद्भाव अहिले मजबुत बन्दैछ । टीकापुर नगरपालिका र हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू यसका लागि क्रियासिल छौं ।
प्रस्तुति : प्रकाशविक्रम शाह
विकास आयोजना निर्माणमा गति लिंदै जोशीपुर
गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृित दिवस: शान्ति र लोकतन्त्रका लागि भएको भूमिकाबारे चर्चा
ससुरालीमा ३२ किलो सुन गाड्ने ५ जनाविरुद्ध राजश्व चुहावटको मुद्दा, १६ करोडबढि बिगो र ३ वर्ष कैद दाबी